UCanzibe 1, 2013 ngokuthi umnikelo 44 izimvo
Kokude kube bobubude, we were lana… 🙁
kwiminyaka emine emva kokuya yogcino WordPress, kwaye 189,795 ukulanda emva, Transposh uya kuba eshiya wogcino wordpress.org.
Kubonakala, lonke eli xesha widget kwethu kwaba ilinki kwisayithi yethu, kwaye nangona kwakunokwenzeka ukususa kuyo, lo ngokuchasene izikhokelo wordpress.org.
Esi sikhokelo ukuba awukwazi ukumamkela, sikholelwa ukuba bafanelwe udumo ngomsebenzi wethu. Akukho ngaphantsi kwe twitter, facebook, okanye nayiphi na enye inkampani eyaziwayo kakuhle ngokubonelela iqela lesithathu widgets phandle phaya.
Kwakhona ayikwazi ukwamkela into yokuba plugin wethu uya kususwa ngaphandle kwesaziso, kwaye ngaphandle naliphi ixesha ukwenza utshintsho, ngqo ngaphandle blue.
Asikwazi ukuvumela ukuba imiyalezo ukuba iposi neqonga Java luza kususwa ngenxa nje iimodareyitha bangenzi njengazo, okanye isigqibo ukuba bayichasa imithetho ukuba bathe bakuyila ngokwabo. Imithetho abafuni ukuba aphinde.
Zikhululekile ukuba enze nasiphi na isigqibo athanda, emveni kwakho konke, yayo wabo ibamba kunye nemithetho yazo. Ayikwazi ngoyaba ukuba, Ngethamsanqa ngokwaneleyo musa ukuba samkele kubo.
Ukuba ufuna ukukhalaza, musa ukukhalaza apha, zama kukukhalaza kwi iiforam, kodwa uqikelelo yam kukuba iya kumodareyithwa, wordpress.org ayikho lwesininzi, okanye ibe GPL site ezingqinelanayo, yonke into kufuneka kubekho free, kweendleko, intetho, leyo isizathu ofumene iitoni plugins usisiqhwala benzela nokukhuthazwa kuphela kuguqulelo pro. Oku kwakhona koko wacebisa ukuba siyenze Transposh. Ke andithandi ukuba thina, akukho bit enye.
Ukuba uguqulelo elilandelayo liya kuze layisha kuloo sayithi, iya kuba inguqulo ekhubazekile, (ngaphandle links apha, Ngokuqinisekile) hayi inguqulo kakhulu ezisebenzisekayo. Inguqulo entsha (non bekhubazekile) ziya kunikwa kanye apha phezu download page. Ukuze ngoku kuya kufuneka sidibanise yindlela update.
Zive ukhululekile ukuxoxa oku kule izimvo apha.
So kudala wordpress.org, nokubonga zonke iintlanzi.
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele ephawulweyo Nge: wordpress.org